တရုတ်ပြည်ထဲရေးနံရံကပ်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | ရွှေတံဆိပ်
WPC (သစ်သားပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်) သည်ထွန်းသစ်စစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ WPC စီးရီးထုတ်ကုန်များတွင်ကော်၊ သုည formaldehyde စသည်တို့မပါ ၀ င်ဘဲသစ်၊ ပလပ်စတစ်၊ ထို့အပြင်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထပ်သားကိုလုံးဝအစားထိုးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတွင် formaldehyde၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မသက်ဆိုင်သော၊ ရေစိုခံနိုင်ခြင်း၊ မီးလျှံတိုက်ဖျက်ခြင်း၊ ပိုးဖလံ၊ အဆိပ်မရှိသော၊ အနံ့မရှိခြင်း၊ လက်သည်း၊ planing၊ sawing၊ ပန်းချီ၊ , ရောင်စုံ, ကွဲပြားခြားနားသတ်မှတ်ချက်များစသည်တို့ကို
WPC နံရံ panel က
60% PVC ဗဓေလသစ် + 20% သစ်သားမုန့်ညက် + 20% အပိုဆောင်းဖွဲ့စည်းမှု
ဝတ်ဆင် - ခံနိုင်ရည်; နေကာမျက်မှန်
စားသောက်ဆိုင်၊ ဆေးရုံ၊ ဟိုတယ်၊ စူပါမားကတ်၊မီးဖိုချောင်၊ living ည့်ခန်းနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
တိုက်ရိုက်မြို့ရိုးပေါ်မှာ install လုပ်ထား
ပြည်ထဲရေး Wall Panel ကိုအားသာချက်များ
၁။ စိမ်းလန်းသောဂေဟဗေဒ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာ၊ သဘာဝသစ်သားကြည့်ခြင်းနှင့်ခံစားမှု။
2. 100% ပြန်လည်အသုံးပြုနှင့် eco-friendly ။
၄။ ရေစိုခံ၊ မှိုခံနိုင်မှု၊ အက်စစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်၊
၆။ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်ခြင်း၊
7. မြင့်သောသိပ်သည်းဆ, အကြမ်းခံခြင်းနှင့်သက်တမ်းကြာရှည်ခံသည်။
Wall Panel ကိုစီမံကိန်းများကြည့်ရန်
ယေဘုယျအားဖြင့်မှာကြားပြီးပါကရက် ၂၀ အကြာတွင်ငွေသွင်းသည်။
Q1 ။ သင့်မှာအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းရှိပါသလား
အဖြေ - ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာကိုယ်ပိုင်စက်ရုံရှိတယ်။
Q2 ။ လျှော့စျေးကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
A: အဲဒါဟာအမှာစာအရေအတွက်ပေါ်မူတည်တယ်။ လှိမ့်အမိန့်လည်းပိုကြီးတဲ့လျှော့စျေးရဖို့ကူညီနိုင်သည်။
Q3 ။ အရည်အသွေးကိုသင်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်သလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာ ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အတွက်မပို့မီတွင် QC စစ်ဆေးမှုကိုခံယူပါသည်။
Q4 ။ ပျက်စီးသွားသောထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်ရရှိပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
Q5 ။ ထုတ်ကုန်ဘယ်လောက်ကြာကြာခံလို့ရမလဲ။
A: ထုတ်လုပ်သည့်အချိန် - ကုန်ပစ္စည်းအတွက် 20 ရက်၊ ကုန်ပစ္စည်းအပြင်ထွက်ရန် ၂၅ - ၃၀ ရက်။
ပုံမှန်ပေးပို့သည့်ကာလ - မြောက်အမေရိကသို့ ၃၀-၃၅ ရက်၊ ဥရောပနိုင်ငံများသို့ ၃၅ မှ ၄၀ ရက်။
အခြားပေးပို့ချိန်များအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Q6 ။ အရောင်းအ ၀ ယ်ဝန်ဆောင်မှုရှိပါသလား
ဖြေ - ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက် 7/24 ပေး။
ရှေ့သို့ 3D Wall Panel များပေါင်းစည်းထားသည်